Amnistii Intarnaashinaal - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 4:23 12 Hagayya 20214:23 12 Hagayya 2021
Amnastiin duula narratti bane jechuun mootummaan Itoophiyaa komate
Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa gabaasa Amnastii Intarnaashinaal haleellaa saal-quunnamtii naannoo Tigraayitti irratti baase hanqina qaba jechuun komate.
...tti maxxanfame 5:59 26 Waxabajjii 20215:59 26 Waxabajjii 2021
Abdii Raggasaaa si'a 48 mana murtiitti dhiyaatee 'bilisaan' gadhiifamus irra deebiin qabame
Abdii Raggaasaa Mana Murtii Waliigala Oromiyaatti yakka ittiin shakkamerraa bilisa jedhamuun erga gadhiifamee osoo gara mana maatii isaatti deemaa jiruu karaatti qaama nageenyaa mootummaan qabamuun irra deebiin akka hidhame paartiin isaanii BBCtti hime.
...tti maxxanfame 5:01 16 Waxabajjii 20215:01 16 Waxabajjii 2021
Amnastii Intarnaashinaal ibsa baaseen, Poolisiin erga Obbo Daawud Ibsaa manatti hidhee namni biraa gara mooraa isaaniitti akka hin gallee fi akka hin baane dhorkeera jedhe.
...tti maxxanfame 8:45 21 Ebla 20218:45 21 Ebla 2021
Biyyoonni Baha Giddu-galeessaa du'aan nama adabuun addunyaarra dursa qabatan
Iraan, Masrii, Iraaq fi Sa'uudii Arabiyaan ,Chaayinaatti aananii tarree biyyoota addunyaarratti du'aan nama adabanii kan Amnastii bara 2020 irratti baase irratti galmaa'aniiru.
...tti maxxanfame 15:24 26 Guraandhala 202115:24 26 Guraandhala 2021
Mootummaan Itoophiyaa gabaasa Aminastii irratti deebii kenne
Mootumman Itoophiyaa gabaasni Aminastii Intarnaashinaal ajjeechaa jumlaa Aksumitti raawwate jedhee baase 'mudaalee qaba' jechuun qeeqe.
...tti maxxanfame 12:27 26 Guraandhala 202112:27 26 Guraandhala 2021
Loltoonni Ertiraa Aksumitti lammiilee nagaa 200 ol ajjeesuu Aminastii Intarnaashinaal ibse
Loltoonni Ertiraa Naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti namoota nagaa dhibba lamaa ol ta'an ajjeesuusaanii ragaa walitti qabachuu Aminastii Intarnaashinaal gabaasa har'a baaseen beeksise. Akka dhaabbatichi jedhetti ajjeechaa Jumlaa raawwate jedhameen maqaa namoota 240 du'an kan walitti qabee yoo ta'u lakkoofsi namoota lubbuu dhabanii kana caaluu akka danda'u eere.
...tti maxxanfame 4:29 25 Guraandhala 20214:29 25 Guraandhala 2021
Aminastiin Aleekis Navaalniin ’sababa yaada isaa ibseef hidhame' kan jedhu irraa mulqe
Jaarmyaan mirga namoomaaf falmu Aminastii Intarnaashinaal hogganaa paartii mormituu Raashiyaa Aleksi Navaliniin ‘’sababa yaada isaa ibseef hidhame'' kan jedhu irraa mulqe.
...tti maxxanfame 4:38 13 Sadaasa 20204:38 13 Sadaasa 2020
Namootni nagaa jumlaan ajjeefamuu qorannoon bira gahe jedhe Aminestiin
Lola Naannoo Tigiraay keessatti gaggeeffamaa jirun namootni nagaan lakkoofsi isaanii hedduu tahe, tarii dhibbaan kan lakkaa'aman jumlaan ajjeefamuu qorannoon bira gaheera jedhe Aminestii Internaashinaal.
...tti maxxanfame 18:07 18 Hagayya 202018:07 18 Hagayya 2020
Aminastii Intarnaashinaal dhiifama gaafate, miidiyaalee komate
Gareen mirga namoomaaf falmu Aminastii Intarnaashinaal tibbana miidiyaa hawaasummaa tiwiitara irratti viidiyoon waa'ee Itoophiyaa gadhiisen kan dhiifama gaafate.
...tti maxxanfame 7:33 19 Adooleessa 20207:33 19 Adooleessa 2020
Ibsi Aministii Caamsaa darbee ''muraasatu haqa qaba''-Abbaa Alangaa Federaalaa
Mootummoonni naannolee Oromiyaa fi Amaaraa ibsi Aministii Intarnaashinaal kun loogummaa qaba dhugaa jiru kan agarsiisus waan hin taaneef fudhatama hin qabu jechuun balaaleffatanii turan